ट्याटु क्रेज : यस्ता छन् चर्चित डिजाइनहरु – HostKhabar ::
ट्याटु क्रेज : यस्ता छन् चर्चित डिजाइनहरु
होस्ट खवर : जानकारहरुका अनुसार ट्याटु बनाउनेहरुको इतिहाँस र परम्परा १२ हजार बर्ष पुरानो मानिन्छ । आज सम्म पनि यो नयाँ फेशनको रुपमा युवाहरुमाझ लोकपृय छ ।
ट्याटु, पियर्सिंग वा बडी मोडिफिकेशन body modification जे नामले चिनिएपनि विश्वभरका विभिन्न स्थानमा बसोवास गर्ने मानीसहरुले कला र फेशनको रुपमा यसलाई जिवितै राखेका छन् ।
इतिहाँसलाई हेर्ने हो भने आइसम्यानका रुपमा चिनिने अलास्का, ग्रिन ल्याण्ड, साइबेरीया लगायतका क्षेत्रका मानिसले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । उनीहरुले ३३७० देखि ३१०० ईसा पूर्व को विचमा यसको प्रयोग गर्थे । यसका अलवा सुडान, फिलिपिन्स, मंगोलिया, पश्चिम चीन लगायतका स्थानमा पनि प्राचिन कालदेखि ट्याटु प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ ।
भारतको छत्तिसगढ राज्यका मानीसहरुले पनि प्राचिन समयदेखि नै यसको प्रयोग गर्दै आएका हुन् । प्राचिन मिश्रहरुले यसको प्रयोग ईशापुर्व २१३४ देखि १९९१ मा गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपालमा ट्याटु कहिले देखि र कसले वा कुन समुदायका मानीसले प्रयोग गरे भन्ने एकिन इतिहाँस छैन । तथापी तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने केही आदिवासीहरुले प्राचिन कालदेखि नै यसको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायका मानीसहरुले प्राचिन किराँतकालिन समयदेखि नै ट्याटु जस्तै विभिन्न आकृती आप्mनो शरीरमा कुँदेर बनाउने गरेको पाइन्छ । तराइ क्षेत्रमा बसोवास गर्ने राजी, थारु आदि समुदायका मानीसहरु पनि अहिले सम्म पनि चिउँडो, हत्केला लगायतका अंगमा विभिन्न आकृती कोर्ने परम्परा छ । यसैको परिमार्जित वा आधुनिक रुप नै ट्याटु हो ।
के छ ट्याटुको महत्व?
मानीसहरु आप्mना प्यारो लाग्ने वस्तुको आकृती आप्mनो शरीरमा कोर्ने भएकाले यो प्रेम र आत्मियता संग सम्वन्धित छ । जो मानिस कसैको मन मस्तिष्कमा रहन्छन उनीहरुको सम्झनाका रुपमा मानिसहरु ट्याटु कोर्ने गर्दछन् । परम्परा र जिवनका घटनाहरुको प्रतिविम्वका रुपमा पनि यसलाई लिइन्छ ।
मानिसहरुको आर्कषण जुन चिजमा छ, त्यसलाई ट्याटुमा उतार्ने युवा पुस्ताको भनाई छ । ईश्वर, फुल, कसैको नाम वा अक्षर, कसैको तस्विर आदि विभिन्न कुराहरु ट्याटुका रुपमा कोरिन्छ ।
भनिन्छ मानिस मरिसकेपछि पनि उसको याद झल्कने गरी आफन्त वा प्रियजनले ट्याटु कोर्दछन् । त्यसैले पनि यसको अति महत्व छ । आजभोली नेपालका काठमाडौं लगायतका प्रसिद्ध शहरमा ट्याटु खोप्न सजिलै पाइन्छ ।
केही प्रसिद्ध ट्याटु डिजाइनहरु यस्ता छन् :
Sports Related Tattoos
2. Politics Related Tattoos
3. Celebrity Tattoos
4. Fashionable Tribal Design
5. Pet/ Animal Tattoos
6. Abstract Design
7. Name Tattoos
9. Bird Tattoos
10. Peacock Feather Tattoos
11. Musical Notes
डस्की छालाका लागि मेकअप
‘मिस नेपाल २०२०’ को घोषणा (सिधै अनलाइन मार्फत जान र मापदण्ड सहित)
हानिकारक रंगीचंगी कपाल
चाउरीपनको उपचार बोटोक्स के हो ?